Sida loo isticmaalo VLC inuu u ciyaaro Blu-Ray movies
Qeybta 1: VLC bandhig
Qeybta 2: Wixii Windows Users
Qeybta 3: Wixii Mac users
Qeybta 4: Wondershare Video Converter Ultimate
VLC waa ciyaaryahan warbaahinta gaar ah. Waa mid ka mid ah ciyaartoyda warbaahinta xorta ah ee ugu caansan laga heli karaa shabaqa, laakiin sidoo kale mid ka mid ah aad u yar in ay ka ciyaari kara audio badan iyo sidoo kale qaabab video muuqan ma aha oo kaliya. Waxa ay ahayd sabab u ahaa xaqiiqada in VLC noqday in waqti aad u yar oo caan ah. Waa sahlan tahay si aad u isticmaasho ciyaaryahanka warbaahinta in ciyaari karo MPEG , QuickTime , MKV , AVI, DIVX, 3GP iyo qaabab kale oo badan.
La heli karo qalabka socda ku saabsan dhammaan noocyada kala duwan ee nidaamyada hawlgalka, waxa ay noqon Windows, Mac, Android ama macruufka iwm, VLC ayaa hareeyay suuqa ciyaaryahan warbaahinta ayaa muddo ka badan toban sano hadda. Dhinacyada ay miday fiican, waxa uu leeyahay user a interface saaxiibtinimo iyo sidoo loo isticmaali karaa si fudud weyn iyo raaxada. Waxa kale oo uu leeyahay tiro ka mid ah fursadaha Customization ku daray in gargaarka dadka isticmaala dhamaadka maalintii.
Mid ka mid ah qaababka ugu yaab leh cusub ee VLC waa in ay hadda taageertaa dib of ciyaari Blu-Ray filimada . Haa, waa dhab!
2.0 iyo ka dib taageero version Blu-Ray warbaahinta loo maqli karo ayaa qaar ka mid ah hawlaha dheeraad ah. Hoos siiyo waa hage ku yaal sida laga soo xawilo forum VLC ee. Waxa aad ku raaxaysan karaan qaar ka mid ah Blu-Rays on your computer si xor ah. VLC 2.0 ama version ka dib ay taageertaa loo maqli Blu-Ray. Waxaad kala soo bixi kartaa version ugu danbeeyay ee website-ka rasmiga VLC. Si kastaba ha ahaatee, sababo sharci ah, maktabadaha DRM AACS iyo BD + iyo furayaasha weli aan la geeyey. Taasi waxay ka dhigan tahay oo keliya Blu-Ray disc la maktabadaha AACS bandhigi waxaa taageera.
Talaabada 1: Tag: Videolan.org, ka dibna soo baxdo iyo rakibi nooca ugu dambeeya ee VLC aad nidaamka.
Talaabada 2: Tag: http://vlc-bluray.whoknowsmy.name/ soo bixi DIIWAANKA furayaasha (KEYDB.cfg) iyo AACS firfircoon MAKTABADDA (libaacs.dll for Windows ama libaacs.dylib u Mac).
Qeybta 2: dadka isticmaala Windows
Talaabada 1: fur meesha user aad ("C: \_ Users \_ aad \_ AppData username")
Talaabada 2aad: In loo sahlo aragtida files maqan iyo fayl (Under Folder Options - View tab ka dibna dooro "show files maqan ..."> dooro 'ok')
Talaabada 3: Open "AppData" hagaha ama abuuro folder iyo magac u aacs
Talaabada 4: Place file ka soo bixi KEYDB.cfg in si toos ah galkan.
Talaabada 5: Tag "c: \_ Program Files" ama "c: \_ Program Files (x86)", 64bit haddii socda
Talaabada 6: Dul "VLC" buugga, iyo file libaacs.dll u dhaqaaqo u galay.
Tallaabo 7: Hadda, waxaad si fudud u ciyaari karaa Blu-Ray disc la VLC on Windows oo bilaash ah. Fiiro gaar ah: dambeeyay VLC ayaa hadana ma heysato taageerada menu weli.
Qeybta 3: Dadka isticmaala Mac
Waad laga yaabaa gal u dhiganta oo guurto faylasha loo baahan yahay sida soo socota. Tag: http://vlc-bluray.whoknowsmy.name/ , heli faylasha loo baahdo.
Talaabada 1: Place database furayaasha ee / Library / rabtid / aacs / (waxaa loo abuuro haddii aysan ka jirin).
Talaabada 2: Xaq-guji VLC, doortaan "waxyaabaha xirmo Show" oo dhigay file in Tusmada / MacOS / / V.
Talo: VLC uusan weli taageeraan Blu-Ray bedeley sidaas waa inaad gacanta dooro horyaalka u ciyaaro. Sidoo kale, oo dhan ma filimada Blu-Ray waxaa taageera.
Wondershare Video Converter Ultimate waa ka duwan oo aad u weyn in VLC media player. Waxaa ku jira dhammaan qaababka kala duwan ee loo baahan yahay maalmahan iyo qayb ka mid ah ugu fiican yahay in aanu aad u baahan tahay in ay sameeyaan wax ka mid ah shaqada buugga saldhigyada. Sida VLC, waxa ay ka ciyaari karaan qaab kasta oo warbaahinta loo yaqaan, xaq u baxay sanduuqa. Media player waxay leedahay heshaa oo degdeg ah oo loo isticmaali karaa duuban, howlan, hoorto iyo wadaaga warbaahinta files ka mid ah hababka kala duwan oo loo heli karaa macruufka, Mac, Windows iyo Android sidoo.
> Resource > Video > Sida loo isticmaalo VLC inuu u ciyaaro Blu-Ray filimada?